नगरकोटको त्यो एक रात…. ! - Mitho Khabar
May 23, 2022 mithokhabarLeaveaComment on नगरकोटको त्यो एक रात…. !
बिहानीपखको मिरमिरे उज्यालो, म मस्त निन्द्रामा थिएँ। फोनको घन्टी बज्न थाल्यो, त्यो फोनको घन्टीभन्दा प्यारो मेरो लागि त्यो बिहानीपखको निद्रा थियो।
फोन साइलेन्ट गरेर सुतिरहेँ।
दोहोर्‍याएर बजेको फोनको घन्टीले निद्रालाई छोडेर उठ्न बाध्य बनायो। फोन गर्ने अरू कोही नभएर सागर रहेछ।
नगरकोटको शिरशिरे हावा, त्यो मन नै लोभ्याउने भ्यू, भ्यू टावरबाट देखिने ती हिमश्रृङ्खला निकै आकर्षक
अघिल्लो दिन नै म र सागर नगरकोट घुम्न जाने प्लान भएको थियो। छिट्टै निस्क भन्न फोन गरेको रहेछ। सागर र म दुई वर्षदेखि प्रेममा थियौं। म घरमा साथीहरूसँग घुम्न जाने बहाना बनाएर निस्किएँ।
घर छेउ मै सागर लिन आएका रहेछन्। हामी त्यहाँबाट नगरकोटतिर लाग्यौं। नगरकोट म पहिलोचोटि गएको थिएँ, सागर त्योभन्दा पहिले धेरैचोटि गैसकेको रहेछ।
नगरकोटको शिरशिरे हावा, त्यो मन नै लोभ्याउने भ्यू, भ्यू टावरबाट देखिने ती हिमश्रृङ्खला निकै आकर्षक देखिन्थे।
मौसम बिहानदेखि पानी पर्ला, पर्लाजस्तो भएको थियो नभन्दै पानी पर्यो।
घडीले रात पार्नै आँटेको थियो। हामी एक प्रेमिल जोडी एकअर्कामा मग्न, मख्ख हुँदै बिहे भएका जोडी हेर्दै हाम्रो पनि त्यही दिन आउँछ भन्दै मीठा मीठा गफ गर्दै थियौं।
पानीका एक दुई फोका झर्न थाले, हामी खाजा खान भनेर एउटा लजमा गयौं। खाजा खाँदै हामी एक अर्कालाई मुखामुख हेर्दै थियौं।
हामी त्यही नगरकोट बस्यौं। त्यो दिन पानी परेर होला हामी बसेको होटलमा सबै कपल जोडीमात्रै
खाजा खाएर सकियो तर पानी झन् बढ्दै आउन थाल्यो। घडीले रात झमक्कै पार्यो। पानीमै भए नि हामी फर्किन लाग्यौं। अलि तलमात्रै आइपुगेका थियौं पानीको बेगले बाइक चलाउन नै गाह्रो भएको थियो सागरलाई।
वरिपरि देख्ने मान्छेहरू हामीलाई पानीमा बाइक नचलाउन सम्झाउँदै थिए। सागरले एउटा लजको छेउनेर बाइक रोके, अनि मलाई सोधे, ‘आज यतै बसौं न माया जान सकिँदैन जस्तो छ’, सागरले मलाई माया भनेर बोलाउँथे।
म दोधारमा परेँ ‘हुन्छ’ भनौं भनें घरमा के भन्नु, ‘हुन्न’ भनौं भने जान सक्ने अवस्था छैन, मैले टाउको हल्लाउँदै ‘हुन्छ’ भनेँ। हामी त्यही नगरकोट बस्यौं। त्यो दिन पानी परेर होला हामी बसेको होटलमा सबै कपल जोडीमात्रै देखिन्थे।
सागर र म घुम्न पहिलेदेखि नै जान्थ्यौं तर बेलुका घर नै पुग्थ्यौं। आज पहिलो पटक ऊ र म सँगै बस्दै थियौं। मनमा अनेकौं कुराहरू आइरहेका थिए।
होटलमा बसेका सबै रमाइलोतिर मस्त अनि व्यस्त देखिन्थे। नाच गान चल्दै थियो। सबै आ-आफ्नै पारामा। कोही हातमा बियरको बोतल लिएर नाच्दै थिए, सागरले पनि बियर खान मेरो अनुमति माग्दै थियो। मैले रोकिनँ पनि। पानी रोकिन थाल्यो, रात छिप्पसकेको थियो।
खै कस्तो चिज रहेछ यो नशा भन्ने पनि आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अनि मायाभन्दा कामुकता प्यारो लाग्ने!
सागरलाई बियर शरीरमा लागिसकेको थियो। म पनि नशामै थिएँ। सागरको कर कापले मैले पहिलो पटक सागरसँगै बियर खाएको थिएँ।
रात परिसकेकाले म्युजिकको साउन्ड बन्द भयो। त्यो होटलमा बस्ने सबै जना आ-आफ्नो कोठातिर लागे।
तीमध्ये हाम्रो जोडी पनि एक थियो। बन्द कोठा अनि एक प्रेमील मायालु जोडी, शारीरिक रूपमा परिपक्व त्यसमा पनि शरीरभरि नशा चडिरहेको बेला, हामी दुई एक अर्कालाई चाहन लाग्यौं।
मीठो चुम्बनको स्वादमा, सागर मेरो कपडा खोल्नतिर लागे। म सागरसँग हराइसकेको थिएँ। खै कस्तो रहेछ यो माया भन्ने चिज जसले मलाई संसार जितेको आभास गराउँदै थियो।
यसअघि शा रीरिक स म्बन्ध छोडेर बाँकी सबै सम्बन्ध थिए तर आजबाट हामीबीच कुनै केही रहेन लुकाउन र नदेखाउन।
बियरको नशाभन्दा सागरको नशाले ज्यादै छोएको थियो। कति बेला निदाएछु पत्तै भएन। बिहान छिट्टै निन्द्रा खुल्यो निद्राबाट बिउँझदा त शरीरमा एउटै वस्त्र थिएन। सागर र मसँगै एउटै बेडमा थियौं। म जुरूक्क उठेँ, अर्को बेडभरि मेरो लुगा छरिएका रहेछन्।
लुगा टिपेर म बाथरूमतिर पसेँ। अगाडि भएको ऐना हेर्दौ आफूदेखि आफैंलाई रिस उठ्दै थियो। आफूले आफैंलाई निकै प्रश्न गर्दै थिएँ, जुन प्रश्नको जवाफ म आफैं थिएँ।
ममी बाबाको अगाडि मुख देखाउन पनि लाज हुँदै थियो मलाई। डाँको छोडेर रून मन थियोे। तर सकिनँ।
मनमा सागरप्रति नराम्रो फिलिङ्स आउन थाले। सागरको निन्द्रा खुलेको थिएन। उसलाई उठाउने मलाई मन थिएन। टाउको केही मात्रामा दुख्दै थियो। म सुक्क सुक्क गर्दै रूँदै थिएँ। उसलाई मेरो रूवाइले उठायो। ऊ मलाई हेर्दै छक्क पर्दै थियो। अनि सोध्यो ‘ओइ! पागल के भयो ? किन रोएको, जे नहुनु भैसक्यो। तिमीलाई नि बियरले छोएछ म त झन् झ्याप थिएँ।’
उनको यो कुराले मेरो मुटु टुक्रा, टुक्रा हुँदै थियो। म केही बोलिनँ। सागर भने मलाई सम्झाउँदै थिए। ‘रून्ची हामी छिट्टै बिहे गर्दैछौं अब, तिमीलाई एक्लै राखेर म कहाँ बस्न सक्छु’, यस्तै, यस्तै सान्त्वनाका कुरा थिए उसको।
हामी घरतिर लाग्यौं, मलाई घर नजिकै छोडेर सागर घर फर्किए।
मैले सिकेको संस्कारले मलाई बिहे अगाडि परपुरूषसँग सम्बन्ध नराख्नू, छोरी मान्छे घर छोडेर अन्त रात बस्न नजानू। यस्तै सिकाएको थियो।
यो समाजले मेरो इज्जत, मेरो अस्तित्व यो नीमा राखेको छ। तर मैले यी सबै कुरालाई लत्याएँ। मेरो कु मारित्व नष्ट गरेँ। सागरले मलाई छोड्यो भने मेरो इज्जतमा दाग लाग्छ। बाआमाको प्रतिष्ठामाथि आँच आउँछ । यस्तै नेगेटिभ कुराले मलाई चिन्तित गरायो।
हाम्रो नेपाली समाजमा मात्रै हो वा अरू ठाउँमा पनि यस्तै हुन्छ भन्ने प्रश्न मेरो मनमा आयो।
अनि मैले गुगल गरेँ। कुनै कुनै देशभित्र यो प्रथा रहेछ भने धेरै राष्ट्रहरूले उमेर पुगेको हकमा यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो भनेर सामान्य रूपमा लिएका रहेछन्।
यो थाहा पाएपछि मेरो घाउमा धेरै थोरै मलम त भयो तर पूर्ण रूपले भने ठिक हुन सकेन। मेरो मिल्ने साथीलाई मैले मेरो कुरा सुनाएँ।
उसले सजिलैसँग भनि ‘प्रेमी–प्रेमीकाबीच यो नर्मल कुरा हो, दुई वर्ष भयो म रिलेसनमा भएको, दुनियाँ काँबाट काँ पुगिसक्यो नेपालीहरू भने भर्जिनिटीकै पछाडि परिराछन्’ म झन् अचम्ममा परे उसको कुराले।
समय बित्त्दै गयो, सागरले मलाई झन् धेरै माया गर्न लागे। कुनै दिन पनि सागरले उनको मायामा कमी आउन दिएनन्। उसले गरेको माया देख्दा डर, शंका लाग्ने ठाउँ नै थिएन।
सागरले मलाई माया, समयभन्दा धेरै इज्जत दिन्थे।
मलाई त्यसपछिका दिनहरूमा सागरसँग बिनावस्त्र बस्न सामान्य लाग्न थाल्यो। यसरी नै एक वर्ष बित्यो।
बेला मौकामा हामीबीच झ गडा हुन्थ्यो। कतै हामी छुटिनुपर्छ कि भन्ने डर पनि लाग्थ्यो।
तर सागर मभन्दा परिपक्व थिए सबै कुरामा। मलाई बच्चालाई जस्तो एकोहोरो माया गरिराख्छन सधैं।
उनको घरमा बिहे गर्ने सल्लाह भएछ मेरो भने दुई वर्षपछि गर्ने कुरा थियो।
तर हामी दुई एक भएपछि कस्को के लाग्छ र ! बिहे गर्ने भैइयो।
मेरो आमा बाबासँग सागरले नै कुरा गरे विवाहको लागि।
सागरमा खोट लगाउने ठाउँ नै थिएन।
पेशाले सिभिल इन्जिनियर थिए सागर। बाबा आमाले सागरको एकै वचनलाई सहर्ष स्वीकार्नु भयो।
प्रेममा परेको करिब तीन वर्षपछि हाम्रो प्रेम विवाह हुन पुग्यो।
मेरो शरीर छोएका उनले मेरो सिउँदो छुन पुगे। मेरो यो ‘नीमा भएको मेरो इज्जत जोगाइदिए।
काठमाडौं महानगरमा एक लाख २८ हजार मतगणना, बालेनलाई ४३ हजार मत